အရသာခံ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 9, 2021 Author admin	Comments Off on အရသာခံ
အိမ်နီးချင်းများဆိုတာထက်ခြေရင်းခန်းဆိုပိုမှန်မယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်အိမ်က သစ်သားအိမ်လေးခန်းတွဲကိုး။နောက်မှ တိုက်ဆောက်လိုက်တာ။အဲ့တုန်းကကျွန်တော်အသက် ၁၆နှစ် ။ ကျွန်တော်တို့လူပျိုပေါက်တုန်းက ခုခေတ်ကလေးတေလို စော်ကြောင်ဖို့တွေမသိသေးဘူး။ဂိမ်းဆော့ ဘောလုံးကန် တီးထိုင် ဂစ်တာခေါက်ပဲရှိတာကိုးအရင်က။အဲ့တော့ ဆက်စ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးထင်နေတုန်းမှာပဲ အဖြစ်အပျက်တွေက ကိုယ့်ဆီဆိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ခြေရင်းခန်းက ကုလားလင်မယားက ပထမဆုံး မျက်မြင်ဆက်ဆံမှုကို အလင်းဖွင့်ပေးလိုက်သလိုပဲ။ ကုလားလင်မယားကလည်းရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ရယ်ပဲ။ယောကျာ်းကညီမနဲ့ချစ်နေတာကိုအစ်မကကြားဖြတ်ယူထားတာဗျ….။အလုပ်ကတော့ ဖန်စီဆိုင်ဖွင့်ထားတာပေါ့အကြီးမက။တစ်ခါတစ်လေနယ်ဆင်းပြီးပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကောင်တယ်ရောင်းတယ်။ကျွန်တော့်ကိုဆို လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းပြီးမုန့်ဖိုးပေး မုန့်ကျွေးနဲ့ခင်ရှာတယ်။အကြီးမက နို့အုံကြီးကြီးဖင်ကားကား ကုလားကားထဲကမင်းသမီးလိုပေါ့(သိပ်တော့မချောဘူး) ကလေးမွေးပြီးနောက်ကျတော့လင်မယား နှစ်ယောက်လုံး အပြင်ထွက်မရတော့ဘူး။တစ်ယောက်သွားတစ်ယောက်အိမ်စောင့်။မိန်းမကလည်းယောကျာ်းကို သဝန်တိုစိတ်မချဖြစ်ပေမယ့် စီးပွားရေးအရ ငွေရှာရတစ်ဖက်ဆိုတော့ အဖြစ်မနေနယ်ဆင်းရတဲ့အခေါက်မှာပေါ့….။
အဲ့နေ့ကနောက်ဖေးမှာလေးဂွတစ်လက်နဲ့ ကျုပ်ဆော့နေတုန်းအကိုလတ်က ထမင်းစားနေတာဗျ။ငှက်ကလည်းမရှိဟိုဒီငေးနေတုန်းအကိုလတ် ဂနာမငြိမ်တာကိုသတိထားမိသွားတယ်။ထမင်းစားနေရင်က ခြေရင်းခန်းဘက်ကိုအပေါက်ကနေသွားသွားချောင်းနေတာပေါ့။ခနနေတော့သူ့သူငယ်ချင်းလာခေါ်တာနဲ့ ထမင်းလက်စသတ်ပြီး လိုက်သွားပါလေရော….။ အဲ့တော့မှ သူချောင်းနေတဲ့အပေါက်ကိုသွားကြည့်တော့ ကိုယ့်အရပ်နဲ့မမှီဘူးဗျ ။အာနဲ့တစ်ခြားအပေါက်လိုက်ရှာတော့ သနပ်ခါးသွေးခုံရှေ့နားလေးမှာ ခပ်ကျယ်ကျယ်အပေါက်လေးတွေ့လို့ကြည့်မိတော့မှ…. အားပါး…. ဘယ်အချိန်ထဲက. လိုးနေဆော်နေလည်းမသိဘူး ချွေးတွေရွှဲလို့နှစ်ယောက်လုံး(နွေရာသီကြောင့်လည်းနေမယ်)။ညီမဖြစ်သူနဲ့ အစ်မလင်နဲ့ကအဆက်မပြတ်ကြသေးတော့ အကြီးမ မရှိတုန်းကလေးလာထိန်းသလိုနဲ့ ဇိမ်တွေ့နေကြတာကိုး။ညီမကအကြီးမလောက်ကမကိတ်ပေမယ့် နို့တွေကလုံးဝန်းဝန်းလေး၊ဖင်ဆူဆူလေး၊ညီမကအောက်က အစ်မလင်က အပေါ်က လှေကြီးထိုးနဲ့ တစ်ဖတ်ဖတ်မြည်အောင်ကို လိုးတာ။ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ပထမမျက်မြင်တွေ့ကြုံနေရတာဆိုတော့ ဒူးတွေကခွေကြတော့မလိုလို၊အိမ်သာပဲတက်ချင်သလိုလို၊ တံတွေးမျိုချသံတောင်သူတို့ကြားမှာကြောက်နေမိတယ်။
ခနနေတော့ပုံစံပြောင်းပြီး ညီမက ကုန်းလိုက်တယ်။ဖွင့်ထားတဲ့မီးရောင်အောက်မှာဗျာ… အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကိုမှလတ်တလောအလိုးခံထားရတဲ့လီးအရှိန်ကြောင့်အတွင်းသားလေးတွေပြဲဟနေတဲ့ကြားမှာတွေ့ရတော့ ရင်တဒိတိဒိတ်ခုန်သံတွေပိုကျယ်လာသလားတောင်မှတ်ရတယ်။အစ်မလင်ကလည်းကုလားပီပီ လီးတံကရှည်ပြီးလုံးပတ်ကလည်းတုတ် ၊နောက်ကနေ ဆောင့် ဆောင့် လိုးလိုက်တိုင်းကုလားမကလည်း ”အူး…အား…အား…. အွင်း….”နဲ့ဖီးတက်နေတာများ ။ကုလားကလည်းလှော်ချက်ဗျာ တစ်ဗျတ်ဗျတ်နဲ့ မနားတမ်းခပ်သွက်သွက်ကို ချတာကုလားမမှာ ဖင်ကိုကော့ကော့ပြီးတော့ကို တုန် တုန် တက်သွားတာ။ အဲ့လိုကောင်းနေတုန်း ကလေးက တရေးနိုးထငို တာနဲ့ ကုလားက တရကြမ်းဆောင့်ပြီး ကုလားမကျောကုန်းပေါ်သုတ်ရည်တွေ ပက်ဖြန်းပြီး ကလေးသွားချော့ရော။ ကုလားမလည်း တုန်နေတာမပြယ်သေးပုံပဲတွန့်တွန့်ရင်းနဲ့ဖင်ကိုကော့ကော့နေတိုင်း အဖုတ်ကြီးကို ဟစိ ဟစိနဲ့.. ။ အဲ့အချိန် အိမ်ရှေ့ကအစ်ကိုခေါ်သံကြားတာနဲ့ကျွန်တော်လည်း တောင်နေတဲ့ဂွေးကို လုံအောင်ဖုံးပြီး အပြေးသွားရတော့တာပဲ……. ”လာပြီ ကိုကြီး…”…….။ ကုလားလင်မယားပြောင်းသွားတော့သူတို့နေရာဝင်လာတာ ဈေးကောက်လင်မယားဗျ….။သူတို့လည်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပဲ။ကလေးက နို့မပြတ်သေးဘူးတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကလေးမွေးပြီးထားတော့မိန်းမရဲ့နို့ကြီးတွေကအကိတ်ဖြစ်နေတာ ဘော်လီ အပြင်တောင်လျှံထွက်တယ်ဗျ။
တစ်ခါတစ်လေ လည်ဟိုက်လေးများဝတ်ထားရင် ရင်ညွှန့်နားကဆုံချက်နေရာလေးကပြုးထွက်နေတာ….။ဖင်အိုးကြီးကလည်းအိအိကားကားကြီး။ဈေးကောက်ကလူဖလံပေမယ့် လီးထွားတဲ့အထန်ဗျ။မိန်းမကလည်းအထန်ပဲ။ ကိုယ်ကလည်းရှေ့မှာခဲအိုနဲ့ခယ်မကိုချောင်းပြီးတည်းက အရသာသိသွားတော့ချောင်းရတဲ့အရသာကိုထပ်ခံစားဖို့ပြင်ဆင်ရပြီပေါ့…။ချောင်းနေကျနေရာနားက သစ်သားပြားတွေကိုနည်းနည်းကျယ်အောင်ချဲ့ထားလိုက်တယ်။မျက်လုံး၂လုံးစာလွတ်ယုံလေးပေါ့။သူတို့ရောက်လာပြီးတစ်ပတ်လောက်နေတော့စချောင်း အိမ်ကလူတွေအိပ်အောင်စောင့်ပြီးသေးထပေါက်သလိုနဲ့အပေါက်လေးနားတိတ်တိတ်လေးဝပ်နေလိုက်တယ်။ညအိပ်မီးဖွင့်ထားပေမယ့် ခြင်ထောင်ထောင်ထားတော့အထဲကိုမမြင်ရဘူး။ဒါပေမယ့်ခြင်ထောင်ကတော့ လှုပ်နေတာရမ်းနေတာပဲ။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေကော အသက်ရှူသံခပ်ပြင်းပြင်းကောကြားရတယ်။ ”အွန့်……ကောင်းတယ်… ယောကျာ်း…ဆောင့်..ဆောင့်..” ”ပေါင်ကားထား…. ”နဲ့ လေသံလေးနဲ့ပြောပေမယ့်အမောဖောက်သံဆိုတော့နည်းနည်းကျယ်တယ်။ကိုယ်ကလည်းအားစိုက်နားထောင်နေတာကိုး ဟီး…။ ခဏနေတော့ ယောက်ျားက ”ကုန်းလိုက်”တဲ့ မိန်းမလည်းကုန်းပေးလိုက်ပုံရတယ်။ဘဲကြီးရဲ့ခေါင်းကခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ကိုတိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြွတက်လာတယ်။ ဖင်နဲ့ဆီးခုံရိုက်သံ ”ဘတ် ဘတ် ဘတ်” ကလည်းအဆက်မပြတ်ထွက်လာပြီး မိန်းမကအသံထွက်မညည်းမိအောင်ထိန်းရလို့အသက်ရှူခပ်ပြင်းပြင်းသံကြားနေရတယ်။
ငါးမိနစ်လောက်လဲကြာကော ဆက်တိုက်ဆောင့်သံနဲ့ မိန်းမရဲ့…. ”အ…အ…အ…အ..”ဆိုပြီးပြီးသွားကြတယ်ထင်တယ်။ကိုယ်လည်းမမြင်ရပေမယ့်အသံလေးနဲ့ပဲတင်းတိမ်လိုက်ရတယ်။တစ်ရက်ရက်တော့မြင်ရမှာပဲလို့အားတင်းပြီးအိပ်ယာဝင်လိုက်တယ်….။နောက်ရက်တွေတော့ရက်တိုင်းသူတို့လိုးဖြစ်ပေမယ့်မမြင်ရတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့ သိပ်မချောင်းဖြစ်တာလည်းပါသွားတယ်…..။ ကံများကောင်းချင်တော့ မီးပြတ်တဲ့တစ်ညပေါ့။အိမ်ကလူတွေလည်းမီးပြတ်လို့အစောကြီးအိပ်ပျော်သွားကြပေမယ့်ကိုယ်ကအိပ်မပျော်သေး။အဲ့အချိန်မှာဈေးကောက်မယားရဲ့ကလေးချော့သိပ်သံကြားနေရတာနဲ့သွားချောင်းဦးမယ်ဆိုပြီးထလာခဲ့တယ်။ခြင်ထောင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းထားတော့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင် ပိတ်ကားကြည့်ရသလိုမြင်နေရတော့ဝမ်းသားသွားတယ်။ကလေးကအိုက်လို့အီးအဲလုပ်နေတော့မိန်းမကဘေးစောင်းလေး နို့တိုက်သိပ်နေတုန်းဈေးကောက်က နောက်ကနေ ဘေးစောင်းလေးလိုးနေတာ ။မိန်းမကလည်းအလိုက်သင့်လေးပြန်ပြန်ကော့ပေး ဈေးကောက်ကလည်းအနောက်ကနေ ကော့ကော့ပြီးထိုးနေတာ အငြိမ့်ပဲ။ဈေးကောက်က ထထိုင်လိုက်ပြီး ဘေးစောင်းဖြစ်နေတဲ့မိန်းမရဲ့စောက်ဖုတ်ကို ကုန်းယက်လိုက်သေးတယ်ပြီးမှ သူလီးတံနဲ့စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ဆွဲပီးဖြည်းဖြည်းချင်းထဲ့လိုက်တယ်။မိန်းမဖီးတတ်သွားပြိး….ညည်းသံလေးတောင်ထွက်လာတယ်ဈေးကောက်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းအဖျားနားထိထုတ် အရင်းထိရောက်အောင်ပြန်ထည့်နဲ့ ဇိမ့်ခံလုပ်ရင်း နို့အုံကြီးတစ်ဖက်ကိုလည်းနယ်နေသေးတယ်။
ကလေးအိပ်သွားပြီဆိုမှ မိန်းမကပက်လက်လှန်လိုက်တယ်။ဈေးကောက်က မိန်းမခြေနှစ်ချောင်းကိုမြောက်ပြီး ရှယ်ကိုလိုးတော့တာ ။သူ့မိန်းမကလည်းအောက်ကနေပြန်ပြန်ကော့ပေးတာများ ဆီးခုံချင်းရိုက်တဲ့အသံတောင်နည်းနည်းကျယ်လာတယ်။အားရအောင်ဆောင့်ပြီးမှ ဈေးကောက်က မိန်းမရဲ့ဗိုက်ပေါ်ကိုသုတ်ရည်တေ ပန်းထုတ်ပလိုက်တယ်။မိန်းမကလည်း သူ့လက်နဲ့ လီးတံလေးကို ဂွင်းထုပေးရင်းလရည်တေကုန်လောက်မှ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်စုတ်တော့တာပဲ။ဈေးကောက်လည်းမောပြီးပက်လက်လှန်နေလိုက်တယ်။ဒါတောင်မှ ပြီးသွားတဲ့သူ့လီးတံကြီးကမပျော့သေးပဲ အရှိမပြယ်သလို ထောင်နေတုန်းပဲ။သူ့မိန်းမလည်းသုတ်ရည်တွေသုတ်ပြီးစောက်ဖုတ်ရေဆေးဖို့ထ ထိုင်။ပြီး မလဲကျသေးတဲ့လီးတံကြီးကို ကစ်တွပေးနေသေးတယ်။နို့ကြီးကလည်းအမှောင်ရိပ်မှာတောင်ဖောင်းကားနေတာပဲ။တွဲတောင်သိပ်မတွဲကျဘူး။ ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ဝပြီမို့အိပ်ယာထဲပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်ရက်တေတော့ထုံးစံအတိုင်းရုပ်မမြင်အသံကြားနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေရတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဈေးကောက်လင်မယားခရီးသွားရင်အိမ်လာစောင့်ပေးတဲ့လင်မယားရဲ့အခန်းလေးတွေဆက်ပြောပြမယ်…..။ ဈေးကောက်လင်မယားခရီးသွားကြတယ်လို့အမေပြောတော့ကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အာ့နဲ့ဂိမ်းဆိုင်သွားလိုက် တီးဆိုငိထိုင်လိုက်နဲ့ပဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေကာမှ တစ်နေ့တော့………..။ ကျောင်းကပြန်ရောက်လို့လွယ်အိတ်ချိန်ပြီးရေသောက်ဖို့နောက်ဖေးကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ချောင်းနေကျအပေါက်ဝလေးအရောက်အမှတ်တမဲ့ချောင်းကြည့်လိုက်မိတော့ လင်မယားတစ်တွဲဗျ..။ဈေးကောက်လင်မယားမရှိတုန်းအိမ်လာစောင့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးရောက်နေရင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်၂ယောက်တည်းဆိုတော့ အပီလိုးနေကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ စော်ကြီးကအပေါ်ကနေ စကောဝိုင်းမွှေ့ပြီး ကောင်းနေတာ။သူနို့တွေသူပြန်ပွတ်သပ်နယ်ပြီးစကောဝိုင်းမွှေ့ ဘဲကြီးကစော်ခါးကိုဖွဖွလေးကိုင်ပြီးအောက်ကနေဇိမ်ခံနေတာ။စကောဝိုင်းမွှေ့တာအားရတော့မှစော်ကြီးကမြင်းစီးအကွက်နဲ့ထပ်ဆောင့်ပြန်ကော။ဘဲကြီးလည်းအောက်ကနေပြန်ကော့ကော့ပေးတာစော်ကြီးက နှုတ်ခမ်းလေးကိုဖိကိုက်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်ဖီးလ်နေတာ….။နောက်တော့ဘဲကြီးကစော်ကိုဆင်းခိုင်းပြီးပက်လက်လှန်ဖို့အမူအရာပြလိုက်တယ်။စော်ကြီးပက်လက်လှန်လိုက်တော့အမွှေးနဲ့ဖောင်းနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုမြင်ရတော့ တံတွေးတွေဂလုခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဘဲကြီးကသူ့လီးကိုစောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းပွတ်ဆွဲပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်တယ်။
စော်ကြီးကသူ့ပေါင်ကိုသူပြန်ကိုင်ပြီးဖြဲကားပေးထားတုန်းဘဲကြီးက သာသာမြန်မြန်လေးဆောင့်ဆောင့်လိုးတာစော်ကြီးရဲ့နို့တွေခါထွက်နေတာများ လှလိုက်တာ….။ဘဲကြီးလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသွက်သွက်လိုးလိုက် ဖြည်းဖြည်းနားလိုက်နဲ့ ၁၀မိနစ်လောက် ဆောင့်ပေးပြီးရော.. …”အင့်..အင့်…”ဆိုပြီးစော်ကြီးပေါ်ကိုမှောက်ယက်အပ်ပြီးဖက်ထားလိုက်တယ်။စော်ကြီးလည်း…. စုပ်တသတ်သတ်နဲ့…ဘဲကြီးရဲ့ကျောကုန်းကိုပြန်ပွတ်သပ်ပေးရင်း ဖက်ထားတယ်။ ခဏနေမှဘဲကြီးကခွာပြီးထလည်းထလိုက်ရောစောက်ဖုတ်ထဲကနေသုတ်ရည်တွေပြန်ထွက်ကျလာတာများ ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတာပဲ…။စော်ကြီးက ”ရေချိုးကြမယ်….ကိုအရင်ချိုးနှင့်” ဆိုပြီး တစ်ရှူးနဲ့စောက်ဖုတ်ဝမှာကျန်နေတဲ့သုတ်ရည်တွေကိုသုတ်ပြီး ထမိန်ပြန်ဝတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအသာအယာခြေဖော့ပြီး အိမ်နောက်ဖေးမှာရေသွားသောက်လိုက်တယ်။ ညပိုင်းတွေချောင်းကြည့်ပေမယ့်လုပ်ဖြစ်လားမလုပ်ဖြစ်လားမသိပါဘူးဗျာ..။အသံမကြားရမမြင်ရဆိုတော့…။အဲ့ နေ့လည်ပိုင်းဆိုရင်တော့ ရက်ခြားပဲ…။ကျောင်းကပြန်ရောက်တာနဲ့အပေါက်လေးအရင်သွားကြည့် နစ်ရက်ခြားသုံးရက်ခြားဆိုသူတို့လိုးပြီ…။လိုးတိုင်းစော်ကြီးကအပေါ်ကအရင်နေရမှ….။
တစ်ခါများဆို မတ်တပ်နံရပ်ကိုင်ပြီးကော့ခံပေးဘဲကြီးကအနောက်ကနေဆောင့် နိ့တွေဆိုတာလှုပ်ရမ်းနေတာလှမှလှ….။ဖင်ကောက်ကောက်လေးနဲ့ ဘဲကြီးဆီးခုံကိုအထိမှာ တုန်ခါနေလိုက်တာ အိစက်နေမလားဆိုပြီးကိုင်ချင်မိလိုက်တာ…..။အားရအောင်ဆောင့်ပြီးလို့ပြီးတော့မယ်ဆိုမှစော်ကြီးကထိုင်ချလိုက်ပြီး လီးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်။ဘဲကြီးကခေါင်းကိုပွတ်သပ်ပေးပြီး အရသာခံ…။ ”အ…အ..အ….အွန်း….” ဆိုပြီး သုတ်ရည်တွေစော်ပါးစပ်ထဲမှာထွက်ကုန်ရော…။စော်ကြီးက ဆက်စုပ်နေတုန်း ။ကုန်လောက်ပြီဆိုမှ ပါးစပ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ သုတ်ရည်တွေက မေးစေ့ကနေ နို့စူစူလေးတွေပေါ်ကို ကျဆင်းလာပါ…ရော….။ဘဲကြီးကကျေနပ်အားရတဲ့အကြည့်နဲ့စော်ကြီးရဲ့နဖူးလေးကိုဖွဖွလေးနမ်းပေးလိုက်တယ်….။စော်ကြီးလည်းပါးစပ်ကိုပလုပ်သွားကျင်းဖို့ထမိန်ဝတ်ပြီးထွက်သွားမှ..ထောင်နေတဲ့ကျွန်တော့်လီးကိုလည်း ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးရတာလည်း အခါခါပါပဲဗျာ…………….ပြီးပါပြီ။
ကျွန်မ​​ဧ။်အမည်မှာ မဇင်မာဖြစ်ပြီး အသက်မှာ ၃၅နှစ်ခန့်ဖြစ်သည်….ကျွန်မသည်..ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် ရှိကျူးကျော်ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်နေထိုင်ပြီး သားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်သည်…ကျွန်မဧ။်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောကျာ်းသားများအားဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မပြည့်စုံသောလည်း စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအကြည့် များကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါသည်…ကျွန်မဧ။်လင်တော်မောင်မှာ အသက် ၄၀နှစ်ခန့်ရှိပြီး ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံတို့ချစ်ခင်စုံမက်သောကြောင်ဘ၀တစ်ခုဆိုးတူကောင်းးဖက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ..လင်တော်မောင်မှာ .ညားခါစတွင် အလုပ်အဆင်ပြေ၍မိမိတို့မိသားစုမှာချောင်လည်ခြင်း..သားသမီးများအားကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးထားနိုင်ပြီး…ငယ်စဉ်အခါက ပျော်ရွင်စွာသုံးဖြုန်းခဲ့ပြိး။ ယခုအချိန်တွင် လင်တော်မောင်မှာဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ကြောင့်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၍ လေငန်းရောဂါခံစားနေရပါသည်..ထိုကြောင့်အိပ်ရာထဲလဲနေကာ ၀င်ငွေမရှိခြင်း ၀င်ငွေထွက်ငွေမညီခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်မတို့မိသားစုမှာဆင်းရဲနွမ်းပါးနေခဲ့လေသည်..။ ထို့ကြောင့်ကျွန်မသည်ဈေးထဲတွင် အသီးအရွက်ရောင်းခြင်း အ၀တ်လျှော်ခြင်းစသောအောက်ခြေအလုပ်များသိမ်းကျုံးလုပ်ကာမိသားစုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်….ထို့သို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောဘ၀ကိုကျော်ဖြတ်ရင်းးး လင်တော်မောင်ဆေးရုံဆေးခန်းစရိတ်ကလည်းများပြား ကျွန်မရှာသမျှသည်လည်းနည်းပါးသောကြောင့် …..ကလေးတွေစားစရိတ်ပါ မလောက်ငှာဖြစ်ကာ ကျွန်မသည်ကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေချင်စိတ်များပါပေါ်ပေါက်လာလေတော့သည်….ထို့ကြောင့် ကျွန်မလည်းမိသားစုနဲ့ဝေးရာသို့သွားကာ မြစ်ကမ်းဘေးတွင်တစ်ယောက်တည်းငူငူငိုင်ငိုင်ဆောက်တည်ရာမရထိုင်နေမိလေသည်…။ ထိုအချိန် ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်ထဲက ကျွန်မအ၀တ်လျှော်နေကြဖြစ်သော သူငှေးအိမ်မှာ မောင်မောင်ဆိုသော ကောင်လေးမှာလည်းမြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့သီချင်းအော်ဆိုကာနေသောကြောင့်အလွန်အင်မတန်မှစိတ်ရူပ်ထွေးနေမိသောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေါသထွက်နေမိလေတော့သည် ကျွန်မ……ဟဲ့ မောင်မောင် နင် ဟယ် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားထဲ ဘာတွေအော်ဆိုနေတာလဲ မောင်မောင် …….ဟာ ဘယ်သူများလည်လဲလို့မဇင်မာပါလား….အသဲကွဲလို့ပါဗျာ …လာညီးနေတာ…အမကောဘာတွေဖြစ်နေ မျက်နှာပျက်လို့ပါလား ကျွန်မ….ဒိလိုပါပဲဟာ စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့….. မောင်မောင်…………အမဘာတွေဖြစ်လို့လဲပြောလေ ကူညီလို့ရရင်ကူညီရတာပေါ့…….. ကျွန်မ…….မသိချင်စမ်းပါနဲ့ဟယ် ငါသေသာသေလိုက်ချင်တယ်.. […]